Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Tantaran'i Child L Marcosente momba ny fahazazan-jaza fanampiny Untold Biography Facts
Nohavaozina farany teo Jona 15, 2020
Rehefa manomboka izy dia nomena anarana hoe "Marco". Manome anao ny fandrakofana feno momba an'i Marcos Llorente Childhood Tantara, Biografi, Ny Fianakaviana, ny ray aman-dreny, ny Fiainana voalohany, ny fiainana manokana, ny fiainam-pifandraisana (Ny zava-misy ny sipa), ny fiainana sy ny zavatra hafa fanta-daza hatramin'ny fahazazany hatramin'izy mbola kely.
Marcos Llorente Fiainana sy fiakarana. Credits: Instagram, AtleticoMadrid ary FCP
Eny, fantatry ny rehetra fa izy ilay mpilalao baolina kitra iza tanjona roa natahotra an'i Liverpool nandritra ny fotoana fanampiny tamin'ny fihodinana andiany 2019/2020 an'ny Champions League. Na izany aza, vitsivitsy ihany no namaky ny Biolojia Marcos Llorente izay tena mahaliana. Ankehitriny raha tsy mila ado intsony, avelao aloha hanome anao aloha izahay Loha ny Content mialoha ny azy FENO Tantara.
Tantara nosoratan'i Marcos Llorente:
Marcos Llorente Moreno dia teraka tamin'ny andro faha-30 janoary 1995 tamin-dreniny, María Ángela Moreno,mpilalao basikety iray efa misotro ronono) ary niteraka an'i Paco Llorente, (Mpilalao baolina misotro ronono iray) any an-tanànan'i Madrid, Espaina.
Tahaka ny mpilalao baolina kitra maro manana ny lanin'ny fianakaviana ara-panatanjahantena, nahaliana ny fiainana tamin'ny fahazazany. Nihalehibe izy raha nahatsapa ny zavatra nataon'ny fianakaviany dia nateraky ny lova indrindra indrindra 'genesan'ny baolina kitra'izay nikoriana tao an-vatrany toy ny zazalahy kely.
Ny tena marina dia ny fianakavian'i Marcos Llorente (nanitatra) eo amin'ny lafiny ara-piterahana sy ara-piterahana koa dia samy mpilalao baolina kitra miaraka amin'i Real Madrid avokoa. Nihalehibe i Marcos kely nahalala ny momba ny dadatoany tena lehibe mitazona ny firaketana Real Madrid izay mbola tsy tapaka. Noho izany, tsy mihoatra ny gene sy ny zanany lahy miasa ihany, na dia ny dadany aza dia mpilalao baolina taloha.
Tamin'io fotoana io dia kely i Marcos tamin'izy 3 taona, dadany Paco Llorente (sary etsy ambany) nanapa-kevitra ny hanantona ny kirarony. Ho an'ny raim-pianakaviana mpilalao baolina kitra rehetra (anisan'izany i Paco), dia naharary tokoa ny fiatrehana ny fisotroan-dronono. Paco tsy naniry ny ho isan'ireo izay hilalao baolina farany tamin'ny sarin'ny fianakaviany. Ny mpilalao baolina kitra efa nisotro ronono dia nametraka fifandraisana akaiky tamin'ny zanany lahy Marcos, miaraka amin'ny fanantenana ny hanomezana azy hanohy ny nofinofin'ny fianakaviana.
Paco Llorente dia nametraka fifandraisana mafy tamin'ny zanany lahy tamin'ny mbola kely. Ny hany tiany dia ny hahita ny zanany lahy nanohy ny nofinofin'ny fianakaviana. Credit: Instagram
Marcos Llorente's Fiaviana sy fiainam-piandohana:
Rehefa avy avy amin'ny fianakaviana ara-panatanjahantena izay nahazoan'ireo ray aman-dreny (dadany), ny dadatoany sy ny raibe sy renibe, vola be dia be natao ho an'i Real sy Atletico Madrid, rariny ny mamintina fa i Llorente dia mety ho avy amin'ny fianakaviana manankarena / ambony.
Zazalahy kely i Marcos dia nanonofy ny hirotsahany ho lasa "Ny andian-dalamben'i Madridistas izay misy ny dadany sy ny havany ary ny raibeny.
Fanabeazana Marcos Llorente:
Misaotra ireo olona ao amin'ny fianakaviana izay nitarika ohatra, i Marcos dia manana ny fanantenany voalohany handray ny fampianarana baolina kitra amin'ny Akademia Real Madrid. Na dia ny dadany aza nilalao tao tamin'izany fotoana izany dia fantany fa mila miasa mafy izy izay mahatonga ny club Family-Friendly hiantso azy hiatrika fitsarana.
Rehefa afaka izany, aleon'i Marcos hitafy ny kitapo Los Blancos isan'andro amin'ny andro rehefa nanome voninahitra ny asany tao an-dalamben'i Madrid izy. Ny fahatapahan-kevitra lalandava ary mila manaraka ny dian-tongotr'ireo dadabeny, dadabe sy dadaben-drainy, tsy mbola niseho toy ny nofinofy nandalo fotsiny.
Marcos Llorente Photo Childhood Photo- Talohan'ny taona niaraka tamin'ny baolina kitra. bola: FootballPlayersChildhoodPics
Paco Llorente taorian'ny fisotroan-dronono tamin'ny baolina kitra (in 1998) nandany 4 taona tsara nanabeazana ny zanany lahy tamin'ny hetsika ho an'ny baolina kitra. Ny fahafantarana ny fanirian'ny lahy lahy hilalao baolina ho an'ny fivelomana, dia nanao izay rehetra azony natao mba hanohanana ny tanjony ny mpilalao baolina kitra fisotro ronono.
Ny fiainam-piandohana ho an'i Marcos Llorente:
Indraindray ny ady atao amin'ny Akademia Real Madrid dia misy tsindry mavesatra ary raha vitsy ny tanora mahay mitantana azy, ny hafa kosa tsy. Tamin'ny taona 2002, vonona ny hanomboka fiainana miaraka amin'ny oniversite i Marcos. Mampalahelo fa tsy ny Real Madrid no nantenainy teo aloha.
Raha tokony namela ny nofinin'ny zanany lahy tao amin'ny Akademia Real Madrid izy ireo dia ho lasa any amin'ny maha-olon-tsotra azy, dia nanapa-kevitra ny hamelona azy ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente Las Rozas, fikambanana iray eo an-toerana ao an-tanànan'ny fianakaviana. Raha jerena eto ambany dia fiara kely 20 minitra fotsiny ho any Madrid ny tranon'i Marcos Llorente ao Las Rozas.
Marcos Llorente no nanorim-ponenana tao Las Rozas CF izay nilalao baolina kitra nandritra ny 4 taona. bola: FootballPlayersChildhoodPics
Napetrak'i Marcos tao amin'ny Las Rozas Club de Fútbol ny fikarakarana ny asany. Misaotra faniriana nirehitra mba hihoatra ny oniversite ambony kokoa, dia nandeha nilalao ho an'ny oniversite hafa i Marcos; Nueva Roceña (2006 ka hatramin'ny 2007) sy Rayo Majadahonda (2007 hatramin'ny 2008).
Ny Lalana ho Fitia Biography Tantara:
Na dia nilalao ho an'ny oniversite kely aza izy dia mbola tapa-kevitra mafy ny hahatanteraka ny nofinofy ao amin'ny Akademia Real Madrid. Ny marina dia tsy kivy izy ary mbola nanantena ny hiditra ho any Real Madrid ilay tanora.
Ny hafalian'ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente sy ny fianakaviany (indrindra ny dadany) tsy nahafantatra fehezanteny tamin'izany fotoana izany dia tsy vitan'ny Real Madrid ihany fa nandalo ny fitsapana tao amin'ny akademia.
Marcos Llorente nandritra ny fahazazany tao amin'ny Akademia Real Madrid dia nihalasa ho lasa sahisahy ankizy mitsoka. Izy no karazana tanora voatahy tamin'ny fifehezana baolina adhesive sy ny antson'ireo fanoherana teo aloha. Nanainga ny laharam-pahamehana ho an'ny Akademia Real Madrid i Marcos rehefa nandresy tamin'ny mpanohitra isan-karazany. Izy mihitsy aza dia lasa toy ny kapitenin'ny ilany tanora.
Tanora Marcos ao amin'ny Real Madrid Academy. Credit: Instagram
Marcos Llorente Biography- Mitsangàna amin'ny tantara malaza:
Taorian'ny nampientanentana be dia be tamin'ny ekipa Juvenil Real Madrid dia nahazo fampiroboroboana tany amin'ny Real Madrid B i Marcos Zinedine Zidane izay tamin'izany fotoana izany, no mpanazatra ny ekipa voatokana Real Madrid tamin'izany.
Ny taona 2017 dia nahita ny afovoan-dàlana manosihosy soroka miaraka amin'ireo mpilalao ao amin'ny ekipa zokiolona Real Madrid - ny tiana Mariano, Isco, Modric ary Kroos. Tamin'ity taom-pilalaovana 2017-2018 ity dia nanampy tamin'ny fanampiana ny klioba handresy ny UEFA Champions League, Super Cup ary ny FIFA Club World Cup izay nahalany azy ny lehilahy amin'ny loka famaranana.
Tamin'ny 20 jona 2019, nahatsiaro tena fa nahavita tsara izy ary ny filàna fotoana tsara kokoa dia nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny Atlético Madrid mpifaninana. Betsaka ny fanontaniana manapa-kevitra amin'ny fanapahan-keviny, ka manondro azy io ho endrika tsy fanavahana amin'ny soatoavin'ny baolina kitra an'ny fianakaviany.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratany ny Biolojia Marcos Llorente, ny afovoan-tany dia voalaza mitombo avy amin'ny tanjaka mankany amin'ny hery noho ny hatsarany sy ny andro manokana. Miresaka andro iray manokana, pNahita anaram-bositra vaovao tamin'ny 11 martsa 2020 i Marcos.Ilay Liverpool Slayer". izany anaram-bositra tonga dia misaotra tanjona roa nanapaka ny fon'ny mpankafy Liverpool. Marcos Llorente nandefa ny amboara eropeana eropeana 2018 /2019 tamin'ny taona 2019/2020 Tompondakan'ny Tompondakan'ny Tompondaka eran-tany 16.
Tsy isalasalana fa reharehan'ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente ny mahita ny zanany lahy mitondra ny lova baolina kitra an'ny fianakaviany. Eo anoloantsika maso fotsiny, mety ho eny an-tsena isika mahita tanora tanora iray mamelana ho talenta an'izao tontolo izao. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Marcos Llorente sipany ?:
Nahita ny fiakaran'ny Llorente amin'ny laza mpankafy nentina ao amin'ny Internet hahalala raha manana sipa izy na, raha manambady tokoa izy izay midika hoe manam-bady. Ny marina dia, ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby, misy sipa manintona izay mandeha amin'ny anarany Patricia Noarbe.
Hihaona amin'i Girl Llorente's Girlfriend- Patricia Noarbe
Iza moa i Patricia Noarbe? - Ilay sakaizan'i Marcos Llorente:
Matetika izy no antsoina hoe olona manana â € œHatsaran-tarehy sy brains. Patricia dia mpampianatra mampihetsi-po ary mpihazona mari-pahaizana maromaro. Ny hatsaran-tarehy espaniola mahatalanjona dia mitazona mari-pahaizana avo roa heny amin'ny Lalàna sy Fitantanana orinasa.
Patricia manokana indrindra amin'ny fanomezana fiofanana ara-batana ho an'ny mpanjifa na an-tserasera. Izy no tompon'ny â € œwww.paddyness.esâ € œ, tranokala iray izay manome fiofanana ara-batana sy toro-hevitra momba ny sakafo, indrindra ho an'ny fanatanjahantena.
Fantatrao ve?… Patricia Noarbe no antony tokana nandefasan'i Marcos Llorente an'i Man United. Araka ny Daily Star, Tian'i Marcos hamita ny fianarany eny amin'ny anjerimanontolo ny sakaizany, alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra momba ny hoaviny.
Patricia Noarbe dia olona tsy manam-pitiavana izay tsy manao zavatra hafa ankoatra ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny lehilahy azy. Sary etsy ambany, hita izy nankalaza ny fotoana nampidinin'ny olon-tiany tsy ho ela Liverpool.
Patricia Noarbe mankalaza ny fotoana nampidinin'ny olon-tiany tany Liverpool. Credit: IG
Iray amin'ireo karazan-dàlana ankafizin'ireo mpivady amin'ny fahavaratra ny nosy Espaniola sy ny ranon'i Ibiza. Rehefa mitsara ny fomba dia samy tia ny tenany izy ireo, dia azo inoana fa "œ"fanambadianaâ € no mety ho dingana ara-pomba manaraka ataon'izy ireo.
Marcos Llorente mandany fotoana tsara miaraka amin'ny sakaizany sy ny vadiny. Credit: Instagram
Marcos Llorente Fiainana manokana:
Ireo tia baolina kitra, sahala amin'ny ambiny rehetra dia tia ny biby fiompiny ary i Marcos Llorente dia tsy toy izany. Na ianao aza misy milaza fa tsy misy tsy fivadihana ao amin'ny lalao maoderina, tsy azo antoka fa tsy raisin'izy ireo ny fifandraisan'i Marcos sy ny alikany (KD).
Hihaona amin'ny alika Marcos Llorente. Credit: Instagram
Raha fintinina, i Marcos Llorente dia fandrosoana, tany am-boalohany, mahaleo tena ary tia fihinana alika. Tsy tiany ny fetra, ny fampanantenana tapaka, manirery sy manelingelina ary mankaleo.
Marcos Llorente Lifestyle:
Miaraka amin'ny tombony iray manodidina ny 12 tapitrisa euros sy ny sandan'ny tsena maherin'ny 30 tapitrisa euros, tsy maninona fa milaza i Marcos fa tsy misy fisalasalana fa olona iray tapitrisa.
Na izany aza, momba ny vola dia manana talenta hitazomana ny fifandanjana eo amin'ny fandaniam-bola sy ny fitahirizana ity Marcos ity. Miresaka fandaniam-bola, zavatra iray azo antoka ho azy (Ny fiarany). Ity misy sary an-tsary eto ambadiky ny kodiaran'ity Audi mahafinaritra ity, ilay fiara nofidiny.
Marcos Llorente Car- Toa hita fa mpankafy an'ny Audi izy. Credit: Instagram
Marcos Llorente Fianakaviana:
Raha miresaka momba ny ankamim-pianakaviana dia zava-dehibe ny mampahafantatra anao fa amin'ny ankapobeny, dia nilalao lalao 1100 ho an'ny Real Madrid ny havany, nandray anjara tamin'ny tantaran'ny klioba. Ao amin'ity fizarana ity dia hitondra vaovao misimisy aminao momba ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente 'sy ny fianakaviany sisa ianao.
Momba ny dadan'i Marcos Llorente:
Francisco â € ˜Pacoâ € ™ Llorente Gento dia teraka tamin'ny andro 21 mey 1965 tao an-tanànan'i Valladolid, Spain. Mpilalao baolina mandeha efa misotro ronono izay milalao amin'ny ankapobeny ho mpilalao baolina ankavanana ho an'i Real sy Atletico Madrid. Ity ambany ity ny sarin'i Paco Llorente nandritra ny fotoany tany Atletico Madrid izay niarahan'ny zanany lahy (tamin'ny fotoana nanoratana) manao ny baolina kitra.
Hihaona amin'ny dadan'i Marcos Llorente's - Paco Llorente mandritra ny andro filalaovany miaraka amin'i Atletico sy Real Madrid. Sary: AS, MundoDeportivo ary FootballY aktif sy anio
About Marcos LlorenteâIlay Neny:
Tahaka ny vadiny sy ny zanany lahy dia nanoratra ny toko azony tamin'ny fanatanjahan-tena ihany koa izy. Ny renin'i Llorente 'i MarÃa Ã ngela dia nilalao basikety nandritra ny naha praiminisitra azy. Vehivavy tia fanatanjahan-tena io izay efa nifanaraka tamin'ny lazan'ny anaran'i Llorente.
Momba ny Marcos Llorenteâ € ˜s Unuits:
Tsy afaka ny ho ampy izay teny hilazana ny fahaizan'i Paco Gento izay dadatoan'i Marcos Llorente izay ilain'ny dadany. Matetika antsoina hoe â € œNy lehilahy manana ny fanangonana rakitra kaopyâ € œ, Paco dia fantatra amin'ny iray amin'ireo elatra havia amin'ny ankavia indrindra amin'ny fotoana rehetra ary koa iray amin'ireo Madridistas lehibe indrindra ao amin'ny tantaran'ny Real Madrid.
Hihaona amin'ny dadatoa Marcos Llorente's, Paco Gento, angano taranja baolina kitra. bola: Medium
Teraka tamin'ny 21 Oktobra 1933, ny mpikatroka Real Madrid dia manana ny firaketana ho mpitarika ny endrika klioba rehetra ary lehilahy tokana izy no nahazo ny amboara eropeana enina.
I Paco Gento dia tafiditra ao anatin'ny ekipa angano nofenoina Di StÃ © fano, Kopa, Puskas ary mpilalao malaza hafa. Nandritra ny vanim-potoana 18 niarahany tamin'i Real Madrid, dia nahazo ny anaram-boninahitra La Liga 12 sy amboara eropeana enina izy (ny dimy amin'izy ireo dia mifanesy). Hatramin'izao, firaketana tsy tapaka Ity ambany ity ny peo fohy momba an'i Paco nandritra ny filalaovany.
Ny dadatoan'i Marcos Llorente- Paco Gento dia mihetsika. bola: RealMadrid
Ny sasany amin'ireo dadatoan'i Marcos Llorenteny rahalahin'ny renibeny) ampidiro ireto manaraka ireto;
(1) Julio Gento (mpilalao baolina kitra): Mpilalao baolina ihany koa (mpiaro) izay nilalao ho an'ny Real Madrid. Enina taona izy noho ny rahalahiny Paco (sary etsy ambony).
(2) Antonio Gento (mpilalao baolina kitra): is ny zandriny ho any Gento sy Julio. Izy koa dia mpiady nandritra ny androny.
Nanana anabavy iray antsoina hoe María Antonia Gento izy telo mirahalahy. Fantatrao ve?… Anisan'ireo zanany efatra mifandray amin'ny Real Madrid izy, dia ny dadan'i Marcos Llorente. Manan-janaka efatra i Maria; Joe Llorente, Toñín Llorente, Paco Llorente (Rain'i Marcos Llorente) sy Julio Llorente.
Momba ny Marcos Llorentei Dadabe:
Ramon Grosso dia renibeny fatratra an'i Marcos Llorente izay mpilalao baolina kitra ho an'ny Real Madrid. Fantatrao ve?... Ramon no nandova ny akanjo lobolon'ny Real Madrid 9 an'i Alfredo Di Stefano ary nandresy tamin'ny amboara eropeana 1966 niaraka tamin'i Gento.
Nanan-janaka dimy i Grosso ary ny iray taminy Maria Angela, izay nanambady an'i Paco Llorente (dadan'i Marcos) taty aoriana.
Hihaona amin'ny raiben'i Marcos Llorente, Ramon Moreno Grosso. bola: RealMadrid ary Pinterest
Ny Ramons Grosso Foundation dia natolotry ny zanaka Ramon Grosso hanome voninahitra ny dadany. Ny fototra dia manatanteraka asa maha-olombelona ao amin'ny Chad sy ny toeran-kafa.
Marcos Llorente Untold Facts:
zava-misy #1: ny Kintan'ny fianakaviana amin'ny kintan'ny Real Madrid:
Tsy mila fanamafisana intsony fa ny ra lasan'ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente “Ny andian-dalamben'i Madridistas ”. Ity misy hazo amin'ny tetirazana misy ny anaran'i Madridistas rehetra ao amin'ny fianakaviana Gento-Llorente-Grosso.
Fianakaviana Fianakaviana Marcos Llorente. Credit: RealMadrid
zava-misy #2: AI Tletico indray nanakarama azy:
Nitranga tamin'ny 2007 izany rehetra izany raha i Atletico izay tsy ampy taona an'ny Akademia an'ny sokajin-taona sasany. Tsy maintsy nanakarama Marcos hilalao ny ekipa mba hisolo tena azy ireo amin'ny fifaninanana Gandia. Marcos Llorente 12 taona tamin'izany fotoana izany dia mpilalao baolina kitra an'ny EF Roceña, fikambanana kely tao amin'ny tanàna nahaterahany, Las Rozas. Azonao jerena ve ilay sary eto ambany?
Marcos dia nisolo tena an'i Atletico Madrid tamin'ny faha-12 taonany: Lala
Taorian'ny fifaninanana dia tsy nanaraka an'i Atletico intsony i Marcos fa nanohy ny dian'ny fianakaviany, hira izay nahita azy niditra ao amin'ny Akademia Real Madrid.
zava-misy #3: Famotsiam-bola:
Hatramin'ny nanatevin-daharana an'i Atlético Madrid, ireo mpankafy mpanadihady dia nanomboka nandinika ny zava-misy nataon'i Marcos Llorente, toa ny vola azony amin'ny fikambanana.
Tamin'ny Jolay 2019, nanisy fifanarahana fifanarahana tamin'i Atletico Madrid i Marcos Llorente, izay nahita azy niantoka karama farany € 2,100,000 isan-taona. Mamaky ny karaman'i Marcos Llorente (stats 2019) ho vitsy kokoa dia manana izao manaraka izao izahay;
Vola any Euros (€)
Vola amin'ny Pound Sterlings (£)
Vola any Etazonia Dolara ($)
Vola isan-taona € 2,100,000 £ 1,970,430 $2,286,312
Vola isam-bolana € 175,000 £ 164,202.5 $190,526
Vola isaky ny herinandro € 43,750 £ 41,051 $47,631
Vola isaky ny andro € 6,250 £ 5,864 $6,804.5
Vola isaky ny ora € 260 £ 244 $283.5
Vola isaky ny minitra € 4.3 £ 4.07 $4.7
Vola isaky ny segondra € 0.07 £ 0.06 $0.08
Toy izao ny vola azon'i Marcos Llorente hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Fantatrao ve?… Ny lehilahy antonony any Espaina izay mahazo € 1.889 Euros isam-bolana dia mila miasa mandritra ny 7.7 taona farafahakeliny € 175,000 izay vola azon'i Marcos tao anatin'ny 1 volana.
zava-misy #4: Marcos LlorenteTattoo:
Ny fananana lova ara-pianakaviana amin'ny ràny dia ampy ho an'ny mpilalao baolina espaniola ihany. Marcos, araka ny voalaza eto ambany dia tsy mino ny antsoina hoe "Culture Tattoo". Aleony aseho eo amin'ny vatany ambany ny lalan-drà fa tsy avelany hahita izao tontolo izao amin'ny sary hoso-doko.
Marcos Llorente dia nahazo poy goavam-be sy tsy nino ny tatoazy tamin'ny fotoana nanoratana
zava-misy #5: Marcos LlorenteFivavahana:
Ny zava-misy amin'ny sasany amin'ireo havany (anisan'izany ny fanitarana) Ny anarana kristiana dia manome antony lehibe hinoantsika ny mety hisian'ny ray aman-drenin'i Marcos Llorente hitaiza azy mifanaraka amin'ny fivavahana Kristiana. Na dia ny fiaretany momba ny finoana aza dia ambany, ny tombontsoantsika dia amin'ny fankasitrahan'i Marcos an'i Chrisitan.
Zava-misy momba ny Biografi:
Anarana feno: Marcos Llorente Moreno.
Daty nahaterahana: 30 Janoary 1995.
Age: (25 tahaka ny tamin'ny 2020 martsa XNUMX).
asa: Mpilalao Football (Midfielder).
Ray aman-dreny: Maria Angeles Moreno (Neny), Paco Llorente (Dada).
Bebe mitazana: Ramon Grosso.
Dadabe amin'ny raibe: Antonia Genco sy Jose Llorente.
Fihetsika Super Grand: Paco Gento, Julio Gento,
sy Antonio Gento
dadatoa: Joe Llorente, Tonin Llorente sy Julio Llorente.
mpiray tam-po: tsy misy
hahavony: 1.84 m (6 ft 0 in)
Famantarana Zodiaka: Aquarius.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaran'i Marcos Llorente Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Fernando Torres tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ander Herrera tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Nahita ny tantaram-pitiavan'i Nacho Fernandez momba ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana
Dani Carvajal tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Sergio Busquets tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra